Igumbi elinye / Ikhitshi enesango labucala ePenrith
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguRashmi
Singathanda ukubonelela ngeyunithi yethu esandula ukulungiswa eyahlukileyo etshixwayo enekhitshi elincinci kunye negumbi lokuhlambela eJordan Springs, ePenrith NSW ixesha elide okanye elifutshane lokuhlala. IYunithi ibekwe ngasemva kwipropathi kwaye inomnyango owahlukileyo wokungena ukusuka emacaleni.
Iyunithi yethu inemvakalelo yangoku, inika ibhedi yokumkanikazi ene-air-conditioner entsha yomjikelo. Le yunithi ikwanekhitshi elincinci elinazo zonke izixhobo ezifunekayo ekuphekeni okusisiseko. Ikwanayo ne-microwave, itoaster, iketile, ifriji, iayini yebhodi yentsimbi ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke.
4.86 ·Izimvo eziyi-121
4.86 · Izimvo eziyi-121
Ukuhlala eJordan Springs kulula kakhulu kuye nabani na kuba inayo yonke into ekufutshane. Iziko lokuthenga yimizuzu eli-10 yokuhamba linoWoolworths, indawo yokubhaka, indawo yokucheba njalo njalo. Isikhululo sasePenrith sinemizuzu eli-10 ukuqhuba kwakhona iibhasi zihamba ngexesha elihamba phambili rhoqo ngesiqingatha seyure ukuya esikhululweni. Indawo yokumisa ibhasi yimizuzu emi-2 ukusuka kwindawo yethu. Kukho ipaki enkulu phambi kwendlu yokuhamba ngokuhlwa kunye nendawo yokudlala yabantwana. Ukuba uyawathanda amanzi sinawo nechibi...le suburb isanda kuphuhliswa kwaye intle.
Ukuba kukho into oyidingayo sise next door , plz knock emnyango okanye ufowunele ...thx
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3361
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jordan Springs